Canshuurihii laga qaadi jiray shacabka degmada Afgooye oo illaa iyo amar dambe la joojiyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Canshuurihii laga qaadi jiray shacabka degmada Afgooye oo illaa iyo amar dambe la joojiyay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo maalintii shalay booqasho ku tagay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa soo saaray amar uu ku joojinaayo canshuurtii maamulka degmadaasi ay ka qaadi jireen dadka shacabka ah illaa amar dambe.
Madaxweyne Farmaajo oo degmada Afgooye kulan kula yeeshay waxgaradka iyo odayaasha degmadaasi ayaa dadkaasi ka dhageeystay cabashooyinka ay jeedinayeen, isagoona kadib ballan ku qaaday inuu si deg deg ah cabashooyinkooda wax uga qaban doonno.
Maamulka degmada Afgooye ayaa durbadiiba ku amray ciidamada dowladda hoose ee degmadaasi inaysan wax canshuur ah ka qaadi karin dadka shacabka ah illaa amar dambe, laga bilaabo maanta oo Talaado ah islamarkaana ay taariikhdu tahay 9-ka bisha May 2017-ka, si loo fulliyo amarka madaxweyne Farmaajo.
Guddoomiyaha degmada Afgooye ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C/naasir Caalin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sababaha loo joojiyay canshuur qaadista degmadaasi ay tahay, kadib markii ay soo bateen musuq-maasuq hareeyay qaabka canshuurta loo qaadayo.
Waa tallaabadii ugu horeeysay ee uu madaxweyne Farmaajo si deg deg ah u fulliyo ballan-qaad uu sameeyo, iyadoona inta badan ballan-qaadyadii hore uu u sameeyay xilligii ololaha doorashadiisa aanay weli waxba ka suurto galin.